ဗိုက်ကင်း 155 | Holmbygden.se
တိုက်ခန်းအိမ်များ 1 1/2 စီမံကိန်း, အကြောင်းကိုဧရိယာ 70 စတုရန်းမိုင်,2အခန်းတစ်ခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်တသန့်သိုလှောင်မှုအခန်းထဲမှာ. အိမ်ခြံမြေအကြောင်းကိုတည်ရှိသည် 15 ကီလိုမီတာအနောက်ဘက် Liden နှင့်အကြောင်းကို 55 Sundsvall ၏အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ. အဆိုပါကြံစည်မှုHolmsjön၏အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်စီးတဲ့östsluttningတွင်တည်ရှိသည်. အဆိုပါအဆောက်အဦနှစ်ပေါင်းများစွာoandvändနှင့်မျှမလျှပ်စစ်မီးရှိထားပြီး, ရေနှင့်အပ်ချုပ်သူ. ကြံစည်မှုအရွယ်အစား7511 စတုရန်းမိုင်.
Akution နှင့် display ကို
လေလံတင်ရောင်းချခဲ့အိမ်များနှင့်မြေယာ3အဆိုပါ Bultgatan May 14, Sundsvall.
display ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 25 မှာဧပြီလ 12.00, အကြောင်းကြားစာ p ပြီးနောက် 010-5760726 အဆိုပါခရီးစဉ်မတိုင်မီနေ့ကို.
အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုအဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီးရှိပါတယ်, ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး. အပူသာ woodstove ဖွငျ့ဖွစျသညျ. frame ကိုသစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, သစ်သားပြား၏ပြင်ပကမျက်နှာပြင်မှာ, အခြေခံအားဖြင့်ကွန်ကရစ် / ကျောက်အာကာသတွားရိုက်ထည့်, ခေါင်မိုးစာရွက်အားဖြင့်စီတန်းနေသည်. အဆိုပါအဆောက်အဦအတွက်နှစ်ဦးစလုံးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏ကြီးမြတ်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်- ပြင်ပမှ, မီးဖိုထဲကဆင်းရဲသားကိုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်, အများအပြားပြတင်းပေါက်ကျိုးကြ.
Areal7511 စတုရန်းမိုင်, မြက်မျက်နှာပြင်များနှင့်အသေးစားသောအဘို့ကိုသစ်တောပါဝင်သည်ဟု. အဆိုပါကြံစည်မှုတစ်ခုöstsluttningမြင့်မားတဲ့အနေအထားကိုနှင့်Holmsjön၏အစိတ်အပိုင်းများအမြင်များတွင်တည်ရှိသည်.
အိမ်ခြံမြေကြော်ငြာ – kronofogden.se/3133.html.
လျ: 0771 – 73 73 00
အများပြည်သူလေလံတင်ရောင်းချ items ပိုင်ရှင်မရတဲ့အကြွေးတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ foreclosed ထားပြီး. ဘီးလစ်အားဖြင့်ရောင်းချပစ္စည်းများ.